တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးတို့ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်အစိုးရ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်အစိုးရ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီး အခြေအနေမှန်များအားတွေ့ရှိခဲ့ရမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရောင်းဝယ်နေမှုအခြေအနေများနှင့် ဖမ်းဆီး နှိမ်နင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှမွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆက်လက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်မှပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျအစိုးရ၏ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ ဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ဆနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျအေးတို့ တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျအစိုးရ၏မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဂပြနျအစိုးရ၏မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဋ်ဌ အနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးသှားရောကျကွညျ့ရှု လလေ့ာခဲ့ပွီး အခွအေနမှေနျမြားအားတှရှေိ့ခဲ့ရမှု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး မူးယဈဆေးဝါးမြား ရောငျးဝယျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ ဖမျးဆီး နှိမျနငျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ဂပြနျနိုငျငံမှမှနျပွညျနယျအတှငျး ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး လုပျငနျး မြားဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျအတှငျးစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားနှငျ့ ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ဆကျလကျ ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောမှပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံမှကူညီဆောငျရှကျပေးနသေညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးရငျးနှီးနှီး အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၀
သြဂုတ် ၂၀၁၉ (၃၇)